Cumar Finish: “Qaraxii manta waxaa lala rabay mas’uuliyiin gudaha ku jiray” - Awdinle Online
Cumar Finish: “Qaraxii manta waxaa lala rabay mas’uuliyiin gudaha ku jiray”
December 28, 2019 (Awdinle Online) –Cumar Maxamed Maxamuud Cumar Finish Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho oo ka hadlayay goobta uu ka dhacay Qaraxa ay dadka badan ku dhinteen ayaa u mahad celiyay Ciidamada amaanka oo uu sheegay in weerarkaas ay fashiliyeen.
Cumar Finish oo tirada dhimashada ku sheegay sagaashameeyo ayaa xusay in weerarkaas ujeedada laga lahaa ahayd in gudaha Magaalada la soo geliyo laguna laayo mas’uuliyiin.
Guddoomiyaha waxaa uu qiray in dad badan ku dhinteen weerarkaas oo shacab u badan islamarkaana dhaawac kale uu jiro.
“waxaan rabaa inaan halkaan uga mahadceliyo Ciidamadii amniga ee shafka u dhigay, dhagarbayaashu hagar daamada ay soo abaabuleen in ay u gudubto magaalada, waxaa ay doonayeen in uu u gudbo magaalada si goobo muhiim ah iyo mas’uuliyii muhiim ah loogu baabi’iyo,waana sababta ay tuu
Dhinaca kale Xildhibaan C/Risaaq Cumar Maxamuud oo ka mid ah Golaha shacabka horayna u ahaa Wasiirka amniga Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in dad gaaray 90 qof ay ku dhinteen weerarka.
Xildhibaanka ayaa sheegay in 73 qof oo rayid ah, 17 Booliska Soomaaliya ah iyo afar ajaanib ah ay ku dhinteen weerarka saaka ka dhacay Magaalada Muqdisho.
Previous articleFaafaa Faafahin: dheeraad ah oo ka soo baxaya Qaraxii Ex-Koontarool
Next articleMore than 92 killed, close to 130 injured in deadly bombing in Somalia